tọrọ ntọala : 1998
Echefukwala discuss Zayed University
Zayed University bụ a mba na mpaghara ndú na agụmakwụkwọ ọhụrụ. hiwere na 1998 na nganga kpọkwasịrị aha Onye malitere okpukpe nke Mba - mbubreyo Sheikh Zayed biini Sultan Al Nahyan, a flagship ewumewu emewo zutere President si atụmanya dị elu. taa, Zayed University nwere ihe abụọ oge a campuses na Dubai na Abu Dhabi na ịnabata ma mba na mba ụmụ akwụkwọ.
Zayed University ga-eduga mahadum United Arab Emirates na ghọtara n'ụwa nile n'ihi na ya na-ekere òkè mmụta ma na omenala rụzuru na inwetara nke akụ na ụba na-elekọta mmadụ na mmepe.
Zayed University ga-akwadebe ruru eru gụsịrị akwụkwọ bụ ndị na-enwe ike eme ka ewu na mba site àjà specializations na mmemme nke ọmụmụ nke dakọtara mba ụkpụrụ na site na-enye ihe ndị magburu onwe mmụta gburugburu ebe obibi na-ewusi ọrụ nke mahadum dị ka onye ndú na ọganihu nke sayensị na ọrụ obodo.
A collaborative Educational obodo ebe ụmụ akwụkwọ, faculty and staff work together in pursuit of research and knowledge.
Ntị ọkachamara ụkpụrụ ọma site n'ịgbaso kasị elu ụkpụrụ nke àgwà onye, dabere na-akwanyere, ikwu eziokwu, mmadụ ịgwa, ngosipụta na nghọta na omume na ịdọ aka ná ntị.
Innovation site doo na mmepe nke kasị elu zuru ụwa ọnụ na omume na ozizi, mmụta na research.
Imekọ ihe ọnụ na imekọ ihe ọnụ iji hụ na ihe nweta nke Zayed University ozi na-emeri na ebumnobi na kacha arụmọrụ na irè.
Leadership dabeere na administrative mma na-aga n'ihu nkwurịta okwu n'etiti ndị niile University nketa oke na openness na ndị ọzọ, emeso consciously na ghaghị ha, ma n'ime ma n'èzí mahadum obodo
Guzosie a ọnwụ onu izi gburugburu ebe obibi nke na-akwalite creativity na ọhụrụ.
Kwadebe ruru eru gụsịrị akwụkwọ bụ ndị na-enwe ike eme ka mmepe usoro, na ndị na-arụpụta ná mba ha, -enye ike na pụrụ iche echiche nkà, na-emeghe ka ụwa gbara ha gburugburu.
Anapụta elu àgwà akụziri na-elekwasị anya na-eme mmadụ ọgaranya ụmụ akwụkwọ’ ihe ọmụma na nkà.
Nweta nkwalite ndị University si research larịị.
Gbaa mbọ hụ na ndokwa nke niile administrative ọrụ na nnabata na àgwà, arụmọrụ na nghọta na atumatu.
Mgba a omenala ọhụrụ n'ime nzukọ
Ozi teknụzụ (Security & Network Tech)
Ozi teknụzụ (Enterprise Computing)
Mgbakọ na mwepụ & Statistics
Ị chọrọ discuss Zayed University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews